ISO ရ Red Link Communications မှပေးသော Service များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ISO ရ Red Link Communications မှပေးသော Service များ
ISO ရ Red Link Communications မှပေးသော Service များ
Posted by Bayote on Dec 24, 2010 in Computers & Technology | 8 comments
ဘရုတ် – ဟာ 01 551162 551163 ဘယ်လိုမှခေါ်မရပါလား
၅မိနစ်ကြာ ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါတယ်။ မရ။
၁၅ မိနစ်ကြာ ပြန်ခေါ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ၀င်သွားပါတယ်။
ဘရုတ် – Redlink ကလားခင်ဗျား။
Redlink – ဟုတ်ကဲ့ရှင်။
ဘရုတ် – ကျနော် ကော်နက်ရှင်မကောင်း လို. Service နဲ.ပြောချင်လို.ပါ။
Redlink – ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ လွှဲပေးပါမယ်။
တီးလုံးလေးပေါ်လာပါတယ်။ ၃မိနစ်သာကြာသွားတယ်။ ဘာမှ မကြားရတော့ပါ။ ဖုံးပြန်ကျသွားပါတယ်။
တီးလုံးလေးပေါ်လာပါတယ်။ ၃မိနစ်သာကြာသွားတယ်။ ကြားလိုက်ရတာက
Service မှ တစ်ယောက်လာကိုင်ပါတယ်။ ဖြေလိုက်ပုံက ရတနာပုံက down နေပါတယ်တဲ့။
အမှန်တကယ် တစ်ခြား ADSL Service, Broadband တို.မှာ သုံးရနေပါတယ်။ ယခင်က Red Link Wimax များမှာ ကောင်းမွန်စွာသုံးရပါတယ်။ ယခုတော့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဆိုးလာပါတယ်။
ISO လက်မှတ်ရသော Red Link ကိုဘဲ ဂုန်ပြုပေးရမလား။ ISO ပေးသော လူတွေကိုဘဲ အပြစ်တင်ရတော့မလား။ ISO ရပြီးတော့မှဘဲ Service ကော အင်တာနက်လှိုင်းတွေပါကျသွားကြောင်း ပါ။
နောက်တစ်ခုကြားလိုက်ရတာကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ၀န်ထမ်းများအား အလုပ်ထွက်ပါက IT လောကနယ်ပယ် Company သို. တစ်နှစ် အလုပ်မလုပ်ပါဟု BOND ထိုးခိုင်းကြောင်း……
ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း များ စိတ်ညစ်ကာ အလုပ်ထွက်သွားကြောင်းနှင့် ယခု Engineers ၀န်ထမ်းများမှာလည်း စိတ်ပါဝင်စားမှုလျှော့နည်းလာကြောင်းပြောပါတယ်။
RedLink မှတာဝန်ခံများ အမြန်ဆုံး သိရှိရန်နှင့် Customer လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်၊Customer များအသိအမှတ် ပြုသော ISO လက်မှတ်ကို ရနိုင်ပါစေကြောင်း……
တချို.သောဝန်ထမ်းများဟာတာဝန်အရ (သို့) လစာရယုံသက်သက်သာလုပ်ဆောင်နေကြခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီအားမိမိ၏ထမင်းဆိုသည်ကိုမေ့နေခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီရေရှည်တည်တံစေလိုသောစေတနာမထားခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် မြန်မာပြည်၏ Customer Service များညံ့ဖျင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိ၏၀န်ထမ်းများကို Customer Service အကြောင်းသိရှိစေရန်သင်တန်းပေးသင့်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် Customer Service သင်တန်းကောင်းကောင်းကလည်းများများစားစားမရှိတော့ခက်ပါသေးတယ်…….အော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရယ်……စိတ်မောပါဘိကွယ်…..
အိုင်အက်အိုလက်မှတ် ဆိုတာကလည်း ပိုက်ဆံပေးရင်ရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တကယ်အတိအကျ လိုက်မစစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒေါ်လာငါးထောင်လောက် ပေးရင်ပစ္စည်းတော်တော်များများကို အဲဒီလက်မှတ်တပ်လို့ရတာ အရင်တုန်းက တွေ့ဘူး၏။
red link က service ကတော. တော်တော်ကို ညံ.ဖျင်းလွန်းပါသည်။
သူတို.လုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာမှမရှိပါ။ Internet service မှာတော. Red Link
Wimax ကတော. အညံ.ဖျင်းဆုံးပါ။
ကိုဘရုတ်ရေ~~Red Link ကိုသိပ်တော့လဲအပြစ်တင်မစောပါနဲ့အုံးဂျာ နောက်ဒီ့ထက်ပိုဆိုးဖို့ရှိတယ်။ ဒေါ်ဒေါ်က Red Link မှာအိန်သာနက်သုံးဖို့လျှောက်ထားတယ်ကြားလို့ပါ။ ကိုဘရုတ်ရဲ့ Post ကိုလဲ
Red Link က ဆိုက်တွေချည်းလေ့လာလိုက်ဝါး အဲစောတီး လိုက်စားနေတဲ့အင်ဂျီနီရာတိုတိုက တူတို့ရဲ့ ဂိုဏ်းဂျုတ်ကို ပရင့်ထုတ်ပီးပြထားပေးပါတယ်လို့ အတိအကျ(မရေမရာ)တတင်းရထားပါဒယ်။
တစ်လကို ၁၃၀ ဆောင်နေရတာနော်… စိတ်လေတယ်…. Yadanarpon ထက်လဲ ၅ ကျပ်များသေးတယ်… ငါနော်….
ပြောချင်တာကော ပြောစရာတွေကော အများကြီးပါ။ သည်းခံတာများခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်လာလို.ပါ။ Redlink မှ လူကြီးများလည်း အမြန်ဆုံး လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါစေလို.။ မျက်စိနားများ ပိတ်မနေဘဲ အောက်က တင်ပြတာတွေကိုဘဲ ကြည့်မနေဘဲ လက်တွေ. Customer တွေ အသိအမှတ်ပြုနိုင်အောင် လက်တွေ. ထိထိရောက်ရောက် ပြုစေလိုပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့အားလုံး မှားပါတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ Redlink က ရရှိထားတဲ့ ISO လက်မှတ်က Internet Slowest Organization ဆိုတဲ့ လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ စွတ်ရမ်းတုတ်နေကြတယ်.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မူကလည်း ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်… သူဌေးနဲ့ ရှယ်ရာဝင်တွေက GlobleNet ဆိုပြီးတော့လည်း အိုင်တီကုမ္ပဏီ ထူထောင်ပြီး ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေ ခန့်ထားတယ်ဗျ… ကိုယ်တိုင်လည်း တတ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဒီဝန်ထမ်းတွေ မရှိလည်း တစ်ယောက်တည်း မီးစက်က အစ နိုးတတ်ပါတယ်… သူတို့တွေ ထွက်သွားလည်း မူ့စရာမလိုပါ… ကိုယ်တတ်လို့ ကိုယ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဖုန်းဆက်သွယ်လို့မရတာကတော့ ဖုန်းလိုင်းမကောင်းလို့ပါဗျာ.. မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုတိယ ISP လို့ပြောသားဘဲ ရတနာပုံက ပထမ ISP လေ… ပထမကို လှမ်းပြီး ချိတ်ထားရတဲ့ ဒုတိယ ပေါ့ဗျာ… ရှင်းသွားအောင် အောက်ပါပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ..
Redlink User ( အသုံးပြုသူ ) —–> ဒုတိယ ISP ( Redlink ) ——-> ပထမ ISP ( ရတနာပုံ ) ——–>
အဆင့်တွေ နည်းသွားလေ ပြသာနာနည်းလေပေါ့ဗျာ.. အခုက ကျွန်တော်တို့က ရတနာပုံက တစ်ဆင့်ခံ ယူထားရတော့ ဝန်ဆောင်မူကလည်း အေးဆေးဘဲ သူတို့ကို လွှဲချလိုက်ယုံပေါ့ဗျာ… helpdesk က ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်လုံးဘဲ သင်ထားယုံဘဲ “ရတနာပုံ ဂိတ်ဝေး ဒေါင်းနေလို့ပါ” (မှတ်ချက်။ ။ ကိုဘရုတ် …. ‘ဒါလောက်ကတော့ ကျွန်တော်တောင် ပြောတတ်သေး… တစ်ခါတည်း recorder ထဲ သွင်းထားမယ်ဗျာ အလိုအလျှောက်ဖြေခိုင်းမယ်… ဒါဆို ဝန်ထမ်းအင်အားလည်း မလိုတော့ဘူး’)
ဒါနဲ့ နောက်လာမဲ့ ဖိုင်ဘာတူသည်ဟုမ်း ဆက်ကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ redlink က ဝန်ဆောင်မူပေးအုံးမှာဗျ… ဒီအခါကျရင်လည်း ပိုပြီး ရိတ် ယောင်လို့ ပိုပြီး ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ဝန်ဆောင်မူတွေကို လစဉ်ကြေးတွေ မှန်မှန်ကောက်ပြီး ပေးသွားအုံးမှာနော်…
ခေတ်မီနိုင်ငံတော်ဆီသို့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို အပြည့်အဝရယူပြီး ဝန်ဆောင်မူများကို ဖြတ်တောက်ကာ ပေးကြပါစို့
Business ရေ ပင်မလိုင်းကြီးကနေ လိုင်းတွေကို အခြားကုမ္မဏီတွေကို ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရတာ ထုံးစံလို့ထင်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာလည် ပင်မအင်တာနက်လိုင်းကြီးကို တိုင်းဝါနာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးက ချုပ်ကိုင်ထားပြီး သူတင်မက အခြားသော အင်တာနက်ဆားဗစ် ပရိုဗိုက်ဒါကုမ္မဏီများကိုလည်း ခွဲပေးရပါတယ်။ တယ်လီဖုံးမှာလည်း ဗာရိုင်ဇွန်ဆိုတဲ့ ဖုံးကုမ္မဏီကြီးက ပင်မဖြစ်ပြီး သူကနေအခြားသော တယ်လီဖုံးကုမ္မဏီများကို ပြန်ခွဲပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ပဲ တဦးတည်း လက်ဝါကြီးအုပ်မယ်ဆိုရင် အစိုးရက anti trust အင်န်တိုင်းထရပ်စ် ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲပါမယ်။ ဟိုးတလောက မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ဝင်းဒိုးမီဒီယာ ဆော့ဝဲကို အီးယူက တရားစွဲသလိုပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရတနာပုံက ပင်မလိုင်းဖြစ်ပုံရပြီး ရပ်ဒ်လင့်ခ် အခွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကွာတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလို လူထုအတွက် အခက်မတွေ့ရအောင် လက်ဝါးကြီးစနစ်ကို ထိန်းချုပ်တာထက် အချင်းချင်း စားမာန်မခုတ်ရအောင် ဝေစားမျှစားချပေးထားပုံ ရလို့ အခုလို ဝန်ဆောင်မှုပြသနာတွေ တက်ပုံရပါသည်။